Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday! (Qaybtii labaad) | Dhacdo.com
Home Maqaalo Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday! (Qaybtii labaad)
Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday! (Qaybtii labaad)
Waa qormadeydii aan uga hadlayay Alifleeyda sallafay ee ku hawooda siyaasad u baahan deganaan khibradeed. Maanta waxaan qaybta labaad uga hadlaya arrimo i fajac geliyay oo aan Indho madowga siyaasiyiinta qaarkood aan ku arkay.
Siyaasiyiinta aan ku sheegay ‘Kuwo sallafay’ oo qaarkood aan saaxiibo nahay kana soo wada jeedno Hirshabelle State ayaa waxaan ku arkay dabeecado khalafsan, oo ay ugu horeyso in ay dhaqaalo ku bixiyaan wax aan adduun iyo aakhiraba faa’iido ugu jirin, haba yaraatee ,una badan sidii loo cuuryaamin lahaa horumarada hana qaadka leh ee socda.
Mar sii horeysay waxaan ogaaday in ay jiraan siyaasiyiin ilo ku dhex leh hay’adaha dalka ka jira, kuwaasoo iyaguna hadafkoodu yahay in ay u adeegsadaan musalafinta siyaasaadeed warbaahinta la soo fariistaan eedeymo aad arkeyso kuwa badankood lagu niyad jabinayo bulshadeena.
Maamulka jira haddii uu dadka u adeegayo haba yaraatee waxay ahayd in la dhiirageliyo, bedelkii dhaliilo aan wax soo kordhinayn loo jeedin lahaa.
Midda jirta ee iga daadagi la’ ee in la iftiimiyo u baahan ayaa ah xikmadda ku jirta eedeymaha aan jirin ee nidaamka jira loo jeedinayo, faa’iidada ugu jirta kuwa dhaqaalaha ku bixinaya iyo waxa ay dheeftoodu noqonayso.
Aniga iyo dad badan oo ila mid ah waxaan qabnaa in wax la dhaliilo loo baahan yahay, balse ay dhaliishu noqoto mid wax lagu saxaayo, oo aynaan noqon mid dadka lagu nacsiinayo maamulka, isla-markaana looga fogeynaayo in ay la shaqeeyan nidaamka jira.
Waxaa xusid mudan inay jiraan dad badan oo siyaasiyiin ah, marka ay qiimeeyaan xaaladda uu gobalkeenu marayo, intii ay wax dhaliili lahaayeen ay ka door bidaan in ay iska aamusaan, waana ku bogaadinayaa taas. Haddii dhaliishaada aanay danta gobalka iyo dadka ku jirin, way ila quman tahay in aad iska gaabsato.
Xubnahan oo inta badan xilliyada habeenkii isugu yimaada Hoteelada Magaalada Muqdisho qaarkood iyo goobaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan, ayaan aallaaba arkaa iyagoo ku doodaya dhaliilaha uu maamulku leeyahay uun. Waan u garaabi lahaa mar qura haddii aan arki lahaa iyagoo wax yar xitaa u qabanaya bulshada
Siyaasiyiinta aan ugu yeeray (Alifleeydii siyaasadda ee saynisyahanada ismooday!), waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego inaanay si xun wax ku goobin, ee wadada saxda u maraan hamiga ay ka leeyihiin siyaasadda gobalka oo aysan noqon siyaasi waala noqdaaye ee afka uun ka noqo, kana fogaadaan sifaha halheyskii caanka baxay ee (Dad wada siyaasi ah).